Faritra faha-13 notohanan’ny Cnaps sy ny minisiteran’ny Ati-tany ny any Androy. Nomena tantsoroka ny kaominina amin’ny fomba fitantanana ara-bola sy ny fitsinjovana ny mpiasa amin’ny lafiny sosialy. Nampianarina ny ben’ny Tanàna sy ny mpanolotsaina ny fanaovana antontan-taratasy hampidirana ny mpiasa ho mpikambana amin’ny Cnaps sy ny tombontsoa homena azy ireo. Maro ny kaominina tsy mahalala ny lalàna.
Nohazavain’ny minisitera ny lalàna 2014-018, ny 2014-020 ary ny 2014-021, mikasika ny fanarenana ny kaominina marefo. Nambaran’ny talen’ny CDADDL-ONCD, Randriamilanto Florent, ao amin’ny minisitera, fa tsy maintsy mahaleo tena ara-bola sy ara-pitantanana ny kaominina. Misy vola omen’ny fanjakana azy ireny, toy ny FNP sy ny FDL.
Maherin’ny 500 ny mpandray anjara tamin’ny Carnaval ho an’ny varika tany Toliara. Hetsika natao ny 27 oktobra teo, nandritra ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny varika. Nikarakara izany ny fitantanam-paritra ny tontolo iainana sy ny ekolojia ary ny ala Atsimo Andrefana, notohanan’ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny tontolo iainana WWF. Hita tao avokoa ny hery velona samihafa any Toliara, toy ny sekoly, ny fikambanam-behivavy, ny fikambanana sy ny sampandraharaha ary ny tetikasa misehatra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana, sns. Samy manana ny nampiavaka azy avy ireo mpandray anjara, tamin’ny alalan’ny diabe sy ny dihy na fampisehoana an-tsehatra manokana.